Apple Music inosvika mamirioni makumi mashanu vanobhadhara vanyoreri | Ndinobva mac
Mwedzi mishoma yapfuura, rumwe ruzivo rwakati Apple yasvika mamirioni makumi mashanu evashandisi, zvisinei hazvo haina kutaurwa munhau zhinji, kuti nhamba iyi yaive mubatanidzwa wevashandisi vanobhadhara uye nevaya panguva iyoyo vanga vachiyedza iyo yekushambadzira mimhanzi sevhisi kuburikidza nemwedzi mitatu-yemahara kuyedzwa
Iyi data yakaziviswa muna Chivabvu apfuura, 9 mwedzi yapfuura. Munguva yemusangano weApple wezvemari, Tim Cook pachake akazvisimbisa zviri pamutemo kuti mimhanzi yake yekumhanyisa inoita yasvika zviri pamutemo makumi mashanu evashandisi, vese vakabhadhara.
Kuwedzera kwehuwandu hwevanyoreri kwakabvumidza Apple services kusvika kune zvisingaenzaniswi manhamba, pamwe nezvishongedzo uye nemidziyo inopfeka. Apple services yakarova rekodhi $ 10.900 bhiriyoni. Kana isu tikaisa iyi data muchiono nezvazvino zvaziviswa nekambani yeSweden Spotify, tinoona kuti huwandu hwevanyoreri hunosvika sei 87 miriyoni emadhora.
Nhau dzichangoburwa dzinoenderana neApple Music dzinotiratidza mashandiro anoita mimhanzi inoenderera mberi nekupa zvirimo zvekuona nezvechisimba seimwe yeinokwezva, kuva vhidhiyo yakasarudzika yeBohemian Rhapsody yekupedzisira kuwanikwa kuburikidza nepuratifomu.
Dzazvino Apple Music inogadziridza dzakatipa rutsigiro kweanopfuura mwedzi wapfuura. tsvaga kuburikidza nerwiyo rwiyo, basa iro kusvika zvino yaiwanikwa chete muUnited States. Dzimwe nhau dzakanangana neApple Music yekukosha, tinoiwana mu kuenderana nemidziyo yese yeAkiel iyo e-commerce hofori Amazon yaisa pamusika mumwedzi yapfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple Music inosvika makumi mashanu emamiriyoni ekubhadhara vanobhadharira
Firefox 65 yeMac ikozvino inotsigira Handoff chimiro pane macOS
Nyowani Jaybird RUN XT Wireless Mahedhifoni Akaburitswa